Caraway (စမုန်စပါး) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Caraway (စမုန်စပါး)
Caraway (စမုန်စပါး) ကဘာလဲ။
စမုန်စပါး ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
တစ်ချို့လူများသည် စမုန်စပါးတွင် ကုစားနိုင်သည့်အစွမ်းများရှိသည်ဟု ထင်ကြသည်။ အဆီ၊ အသီးနှင့် အစေ့များကို ဆေးအဖြစ်သုံးကြသည်။
စမုန်စပါးအား အစာခြေခြင်းနှင့်ဆိုင်သည့်ပြဿနာများတွင် သုံးကြ၏။
စမုန်စပါးအဆီကို ချွဲဟတ်ရာတွင်အဆင်ပြေစေရန်လဲသုံးသည်။ ဆီးရွှင်စေရန်၊ ကိုယ်တွင်းရှိဘက်တီးရီးယားများကိုသတ်ရန်၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်းကိုသက်သာစေရန်လဲ သုံးကြပါသည်။
ရာသီလာစေရန်အတွက်နှင့် ရာသီလာစဉ်နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းများအတွက် စမုန်စပါးဆီကိုအမျိုးသမီးများ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကလေးရှိမိခင်များလဲ နို့ပေါစေရန် အသုံးပြုနိုင်ပါသေးသည်။
လည်ပြွန်ရောင်ခြင်းအတွက် ပလုတ်ကျင်းဆေးအဖြစ်လဲသုံးနိုင်သလို သွေးစီးဆင်းမှုကောင်းစေရန် အရေပြားလိမ်းဆေးအဖြစ်ပါ သုံးနိုင်ပါ၏။
ဒီဆေးဖက်ဝင်အပင်ထွက်ပစ္စည်းအတွက် လုံလောက်သည့်လေ့လာမှုမျိုးမရှိသေးပါ။ ဒီထက်ပိုသိလိုသည်များရှိပါက သင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးပင်ဗေဒဆရာများနှင့်ဆွေးနွေးပါ။ တစ်ချို့သောလေ့လာမှုများအရ စမုန်စပါးအဆီသည်
စမုန်စပါး အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ခွဲစိတ်ကုသမှုများပြုလုပ်နေစဉ်နှင့် ပြုလုပ်ပြီးနောက် သွေးတွင်းသကြားပမာဏကို အနှောက်အယှက်ပြုနိုက်သည်ဟူသော ယူဆချက်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူရန်ရှိပါက ၂ပတ်ကြိုတင်၍ ဆေးကိုရပ်ရပါမည်။
နေရောင်တိုက်ရိုက်မထိစေရန်၊ စိုထိုင်းမှုမရှိစေရန်ဂရုစိုက်ပါ။ သတ္တုဗူး ဖန်ဗူးများနှင့် သိမ်းဆည်းပါ။
စမုန်စပါး က ဘယ်လောက်စိတ်ချရလဲ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင် မသုံးပါနှင့်။ (သားအိမ်ကြွက်သားပျော့စေနိုင်သည်) နို့တိုက်မိခင်များ ကလေးများ နောက်ထပ်သုသေတန်မရှိမချင်း မသုံးသင့်ပါ။
စမုန်စပါး ကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
• မစားချင်မသောက်ချင်ဖြစ်ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ အသည်းထိခိုက်ခြင်း
• အနီကွက်ထခြင်း၊ အရေပြားလောင်ခြင်း၊ အရေပြားရောင်ရမ်းခြင်း
စမုန်စပါးကို peppermint အဆီနှင့်တွဲသုံးလျှင် ရင်ပြည့်ခြင်း၊ ရင်ပူခြင်း၊ ပျို့ခြင်းများ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ လိမ်းဆေးအဖြစ်သုံးပါက ဓါတ်မတည့်သောသူများတွင် အရေပြားအကွက်ထခြင်း၊ ယားယံခြင်းများဖြစ်နိုင်ပါသည်။
(ယခုဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ခံစားရမှုမှာ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ အထက်ဖော်ပြပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင် မပါဝင်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။
စမုန်စပါး ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ ဘယ်လိုဓါတ်ပြုမှုတွေရှိလာနိုင်သလဲ
စမုန်စပါးဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။)
စမုန်စပါးသည် သွေးတွင်းသကြားဓါတ်ကိုလျော့ကျစေနိုင်ပါသည်။ ဆီးချိုရောဂါရှိပါက စမုန်စပါးသုံးလျှင် သွေးတွင်းသကြားဓါတ်ကို သေချာဂရုစိုက်ရပါမည်။ ဆီးချိုအတွက်သုံးသောဆေးပမာကဏကို လိုအပ်လျှင်ချိန်ညှိရမည်ဖြစ်သည်။ စမုန်စပါးသည် သံဓါတ်စုပ်ယူမှုကိုအားကောင်းစေသည်။ သံဓါတ်အားဖြည့်ဆေးများ၊ သံဓါတ်ပါသောအစားအစာများနှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုပါက ခန္ဓါကိုယ်တွင်သံဓါတ်ပမာဏကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။
စမုန်စပါး အတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
ရင်ပူခြင်းကိုကုသရန်အတွက် ပုံမှန်ဆေးပမာဏမှာ စမုန်စပါးဆီ ၅၀ – ၁၀၀ မီလီဂရမ်အား Peppermint ဆီနှင့် တွဲဖက်သုံးနိုင်ပါသည်။ လိုအပ်သောဆေးပမာဏသည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးမတူနိုင်ပါ။ သောက်သုံးရမည့်ပမာဏသည် အသက်၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့် တခြားအချက်များစွာအပေါ်မူတည်ပါသည်။ အပင်ထွက်ဆေးပစ္စည်းများသည် အမြဲတမ်းစိတ်ချရသည်မဟုတ်ပါ။ မှန်ကုန်သောဆေးပမာဏအတွက် သင့်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးပင်ဗေဒဆရာများနှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြည့်ပါ။
စမုန်စပါး က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလဲ
စမုန်စပါးကို လက်ဖက်ရည်၊ ဆေးတောင့်၊ အဆီ၊ အစေ့၊ စမုန်စပါးရေ၊ အမှုန့်၊ ပေါင်းရည်အဖြစ် ရရှိနိုင်ပါသည်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဇူလိုင် 3, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဩဂုတ် 22, 2017
Skidmore-Roth, Linda.Mosby's Handbook Of Herbs &Natural Supplements. St. Louis, MO: Mosby, 2001. Print
version. page 137
caraway.aspx?activeingredientid=204&activeingredientname=caraway. Assessed date 27/11/2015
ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, ဆေးဖက်ဝင်, ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင်, ကျန်းမာရေးနဲ့အာဟာရ